Ubani Ongangifundisa IT Ku-inthanethi?
Konke mayelana nokuthuthwa kwempahla
Izindikimba zebha ezihlukile nezingajwayelekile Emhlabeni jikelele
Ukuhamba Umhlaba: 11 Okuphefumulayo Okufanele Ukubone Izimangaliso Zemvelo
by URama K
Kunezindawo eziningi ezahlukahlukene emhlabeni okufanele ukuvakashelwa. Kepha konke kuya ngohlobo lomhloli oyikho. Abanye abantu bathanda ukubona amadolobha amasha avela emhlabeni wonke futhi behlola amasiko ahlukahlukene, abanye bathambekele ekuphumuleni…
Ezimweni zemfundo, izilingo ezihlekisayo zenzelwe ukufundisa abafundi bezomthetho ukuthi bajwayelane nokuhlangenwe nakho kwasenkantolo. Yonke imininingwane nezinto ezibanjiwe kufanele zifakwe ukuze kuqinisekiswe ukuthi zibonakala zingokoqobo. Ngokulingwa okuhlekisayo, abameli abangochwepheshe babengaqonda ngamandla nobuthakathaka…
Amathrendi Aphezulu Ezobuchwepheshe Azobusa Unyaka ka-2018
Okusunguliwe okubabazekayo okunye kwakho okuhlanganisa indlela yokubona ubuso ku-iPhone X ye-Apple bekungenye yezindlela eziphawuleka kakhulu zokuklama izinhlelo zokusebenza ngonyaka odlule. Yize amathrendi ezobuchwepheshe ephila isikhathi esifushane, ukubonwa kobuso kuzobusa imboni yohlelo lokusebenza ku...
Ukuhlaziywa Okujulile Kwazo Zonke Izinhlobo Zamafutha
Noma nini lapho uzwa noma yini ephathelene “nokukhuluphala”, ihlezi iku-negetive. Yize kuyiqiniso ukuthi amafutha amaningi awakulungele kodwa amafutha asadingeka emzimbeni. Awuzwa okuningi ngakho, kodwa umzimba wakho udinga amafutha ...
Amawebhusayithi aphezulu ayi-7 awusizo wokuhambela e-United Kingdom
I-United Kingdom ibizwa ngeGreat country hhayi ngeze - iyinhlanganisela yamazwe amane ngeqoqo elilodwa. I-Royal England kanye nokuyibuka kwayo, izinqaba zasendulo nezakhiwo zase Wales, ubuhle obumunyu bezintaba ezinhle namachibi aseScotland, amadolobhana asendulo…
6 Amaphutha Wedizayini Yewebhu Awusakwazi Ukuwakhokhela
Udale iwebhusayithi emangalisayo kodwa uyehluleka ukubandakanya abasebenzisi noma abasebenzisi abakhononda ngokuzulazula. Kungenzeka kube namaphutha ambalwa okwakhiwa kwewebhu. Ngendlela efanayo, iwebhusayithi iwusizo kakhulu futhi kulula ukuyisebenzisa kodwa abasebenzisi abaningi bacabanga…
Ukumaketha Okuqukethwe vs Ukwakhiwa Kwesixhumanisi
Kunamabhulogi amaningi nezinkampani ze-SEO zonke ezisho izinto ezihlukile ukuze zibekwe ekhasini lokuqala le-Google. Ezinyangeni eziyi-12 ezedlule sihlole yonke le mibono. Sizobeka yonke le mibono ye-SEO embhedeni…
2017 Amathrendi Okumaketha Kwedijithali Ochwepheshe Bezezindlu Nosomabhizinisi
U-2016 usuyaphela, okusho ukuthi ochwepheshe abaningi kanye nosomabhizinisi sebevele bagcwele umusi uma kuziwa ekuhleleni ukumaketha kwedijithali konyaka ozayo. Ilungiselela ukuba unyaka othokozisayo ezimbonini eziningi njengoba singena ku-2017, futhi mhlawumbe…
10 Amathrendi Wedizayini Yezithombe To Rock 2017 and Beyond
Okuthrendayo kuyavela, kudonse ukunaka, kukhule bese kuthi ngemva kwesikhashana noma isikhathi eside kuthathe izinyanga ezimbalwa kuya eminyakeni kuyanyamalala endaweni yesigameko. Uma kukhulunywa ngemidwebo yezithombe sibone izitayela eziningi kakhulu ezivela phakathi neminyaka embalwa...
Uye kubha yezemidlalo. Kungenzeka ukuthi uke waya naseqhweni leqhwa. Kepha uke wangena ngaphansi kwamagagasi ukuze uthathe isiphuzo kubha ecwiliswe ngaphansi kwamanzi ngokuphelele? Kuthiwani ngendlu yangasese yangasese yomphakathi ephendulwe igumbi lokuphumula? Uma uthanda…
Ukuqasha i-Pearson Airport Limos - Ezinye Izinzuzo
Kuyini ukusabela kwakho kokuqala lapho ubona i-limousine? Okunye ukusabela kwakho kungase kukwethuse ngoba kungase kungandile kangako endaweni yakini. Abanye abantu banombono wokuthi yilabo abadumile kuphela abangagibela ama-limousine kodwa…
Indlela Yokundiza Ikilasi Lokuqala Ngesaphulelo
Ukuhamba ibanga lokuqala kuwukunethezeka abantu abaningi abangakwazi ukukukhokhela, kodwa uma unendiza ende ngaphambi kwakho, ukusebenzisa imali eyengeziwe kusigaba sokuqala noma sebhizinisi kungenza uhambo lwakho lukhululeke kakhudlwana. Uma ubhukha amathikithi akho ku-inthanethi, ngokuvamile ngeke…
Imodi Yezokuzijabulisa YamaMalayalees E-USA
by I-Archer Sct
IMalayalam ibhekwa njengenye yezilimi ezinkulu zaseNdiya. Yize iMalayalam ingulona limi lwaseNdiya Kerala, kepha isetshenziswa kakhulu kwezinye izifundazwe ezifana neTamil Nadu neKarnataka. Ngokuya ngocwaningo, cishe ama-38 wezigidi zabantu baseNdiya…
Izinto Ezinhlanu Okufanele Uzazi Ngaphambi Kokujoyina I-Music Academy
by U-Alina J
Isikole somculo siyipulatifomu ebaluleke ngokuphelele kubo bonke abaculi abafisa ukufuna, abafuna ukwakha amakhono abo ngokuba yingxenye yendawo esiza ekukhiqizeni abaculi abahlukahlukene. Abanye abantu bathi, uma unekhono ngempela wena…
Thatha Uhambo Oluya EDelhi Ukuluhlola Njengangaphambili
INew Delhi yidolobha eliqabulayo futhi elihehayo noma kunjalo kungaba yinto ebabayo kubantu abazokwethusa ngokungazi okuningi ngokumele bakwenze edolobheni. Lo mbhalo awukutsheli ngezizathu zokulangazelela idolobha…
Ungayonga Kanjani Okunye Ku-Roadtrip Yakho Elandelayo
Ukuhlala ukonga ohambweni lomgwaqo kungaba nzima, kepha kungenzeka uma uhlela phambili futhi unamathela ezinhlelweni zakho. Ukuhlela uhambo oluya eLos Angeles kungakhungathekisa ngokuningi ongakubona nokwenzayo, ngakho-ke umqondo omuhle ukunika ...
1 2 3 ... 386 Olandelayo